Sida Loo Kordhiyo Hawlgalka Xilliga Fasaxa Iyo Iibinta Qaybta Liiska Emailka | Martech Zone
Your liiska emailka wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah guusha olole kasta oo email ah. Laakiin maxaad samayn kartaa si aad uga dhigto dhinacan muhiimka ah mid ku anfaca inta lagu jiro fasaxyada - waqtiga ugu faa'iidada badan sannadka ganacsigaaga?
Furaha qaybinta waa data. Halkan waxaa ah dhowr qodob oo xog ah oo ay tahay inaad falanqeyso oo aad aruuriso maanta si loo hubiyo in emaylkaaga si sax ah loo qaybin karo markay tahay waqtigii la fulin lahaa ololaha iimaylka fasaxa.
Siyaabaha Loo Kala Qeybiyo Ololaha Iimaylkaaga Fasaxa
Xog -ururinta waxaa ku jira 9 siyaabood oo si wax ku ool ah loogu kala qaybin karo liiska emaylkaaga si aad u beegsan karto waxyaabaha ku jira ka -qaybgalka sare iyo iibinta iibka fasaxa:
Gender - soo qabta in qofka qaatahaagu yahay lab ama dheddig oo tilmaama cidda ay wax ka iibsanayaan. Tus. Nin dumar wax u iibsanaaya, naag wax iibsanaysa nin, iwm.
Halabuurka Qoyska - Qoysku ma leeyahay lammaane, qoys leh carruur, ama ayeeyo?
Juquraafi -adeegso bartilmaameed juqraafi si aad u beegsato ciidaha gaarka ah ama soo saarto nuxurka cimilada-gaarka ah. Tus. Hanukkah ama Christmas… Phoenix, Arizona ama Buffalo, New York.
Xulashada Dukaameysiga - Ma waxay jecel yihiin inay dalbadaan, ku daraan liiska rabitaanka, ka soo qaataan tafaariiqle maxalli ah?
Dhaqanka Daalacashada - waa maxay badeecadaha iyo bogagga ay indha -indheeyeen ee loo adeegsan karo in lagu wado waxyaabaha ka quseeya?
Dabeecadda Dukaameysiga - Maxay hore u soo iibsadeen? Goormay iibsadeen? Ma haysaa xogta wax iibsiga sannadkii hore?
Qiimaha Amarka Celceliska - Fahamka inta macmiilkaagu sida caadiga ah ku bixiyo fasaxa ayaa kaa caawin kara inaad beegsato dalabyo wanaagsan oo kor u qaada fursadaha beddelidda.
Joogitaanka Iibsiga - Ogaanshaha inta jeer ee macmiilku wax kaa iibsado sannadka dhexdiisa ayaa qeexi kara istiraatiijiyaddaada kala -qaybinta fasaxyada.
Astaanta Baabuurka - Baro habdhaqanka gaadhiga macaamiishaada. Miyay inta badan ka tagaan gaadhigaaga? Ma waxay sugayaan sicir -dhimis? Macaamiisha qiimaha xasaasiga ah si gooni ah; u soo dir dalabyada fasaxa si waafaqsan.
Infographic -ku wuxuu faahfaahinayaa qaar iimayl-qaybsanaan heer sare ah fursadaha ciidaha si aad si fiican ugu dhisto liiskaaga oo aad u fahanto hab dhaqankooda qaybaha la hagaajiyay, shaqsiyeynta, iyo bartilmaameedka nuxurka. Sidoo kale, infographic-gu wuxuu bixiyaa liis hubinta imtixaanka horudhaca ah ee iimaylka fasaxa si loo hubiyo in ololahaaga la gaarsiiyo, si fiican loo bixiyo, oo isku xiro dhammaan si habboon.
Kooxda ciyaarta Uplers waxay la kulmeen khubarada suuqgeynta iimaylka Iimayl ku qor Acid si loo abuuro xogtan, Liiska Iimaylka Hyper-Segmentation, taasi waxay kaa caawin doontaa inaad qorshaysato istiraatiijiyad qaybin oo aan laga hortagi karin maalmaha ciidaha.
Tags: kala qaybinta xogtainfographic emailliiska emailkashaqsiyeynta emaylkakala qaybinta jinsigajuqraafi juqraafiololaha email fasaxaiimaylka fasaxa infographickala-qaybsanaantainfographicshakhsi ahaaneedqaybintadoorbididda dukaamaysigakiciyayaal